Hadii aad Jago doontahey ha isku salaamin Mucaaradka Xukuumada Somaliya? – Kismaayo24 News Agency
Hadii aad Jago doontahey ha isku salaamin Mucaaradka Xukuumada Somaliya?
by admin 12th January 2020 0163
Ibraahim Xasan Cawaale oo ka mid ahaa Musharaxiintii u tartamayay Kuraasta degmada Ceelbuur ka soo galaaya Baarlamaanka Galmudug ayaa sheegay in uu kursigaas ku waayay sawir uu la galay Xildhibaan Axmed Macalin Fiqi oo ka mid ah Mucaaradka Xukuumadda.
Ibraahim oo la hadlay Warbaahinta Muqdisho ayaa sheegay afar maalin ka hor inta aan la guda gelin xulidda kuraasta Baarlamaanka Galmudug ayaa lagu wargeliyay in lagu helay sawir uu la galay Xildhibaan Fiqi, sidaas darteed aanu kursiga Xildhibaannimo heli doonin..
Maamulka Puntland oo Shaaciyey Xiliga xukun dil ah ay ku fulineyso ragii kufsaday Caasho Ileys.
SAWIRRO: Amiirka Qatar oo Socdaal lama Filaan ah ku tagay dalka iran.
Dhagayso:- Waraysi:- Gudoomiyaha Kismaayo “ Amaanka Kismaayo waa Wanaagsan Yahay “
Top News: Galmudug maxay ka tiri dagaaladda Saaxo ka socda.